Fanaraha-maso ny akora manta
Mifidy fasika quartz avo lenta avy amin'ny toeram-pitrandrahanay manokana izahay ary mampiasa rafitra fanaraha-maso tsara kalitao, izay miantoka ny kalitao azo itokisana amin'ny takelaka vato quartz izay tena niaviany.Ny akora fototra dia manaraka ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana, ary ny takelaka vokarina dia ankatoavin'ny sampana manam-pahefana ary noho izany dia azo antoka ny kalitao azo itokisana amin'ny vokatra APEX.
A: Ny slab rehetra dia novokarina sy nojerena tamin'ny fenitra henjana mba hamenoana ny fepetra ara-teknika rehetra amin'ny famokarana lehibe eran'izao tontolo izao.
B: Mividiana fiantohana ho an'ny mpiasa tsirairay izahay, ny iray dia fiantohana loza, anisan'izany ny ratra tsy nahy sy ny fitsaboana tsy nahy.Amin'izany fomba izany, ny mpiasa manana risika tsy nahy amin'ny asa dia azon'ny orinasa fiantohana onitra.Misy ihany koa ny fiantohana fiantohana.Toy izany koa raha misy loza mahazo ny mpiasa any am-piasana, ary raha takiana amin'ny orinasa ny fanonerana, dia afaka manonitra ny orinasa fiantohana.
Fanaraha-maso sy fanaraha-maso
Ny ekipa mpanara-maso ny kalitao avo indrindra dia manao izay hahazoana antoka fa ny takelaka tsirairay dia manana kalitao avo lenta amidy
Ny antsipirian'ny slab dia tsy ny lafiny anoloana ihany fa ny ilany aoriana ihany koa mba hahazoana antoka fa ny singa tsirairay dia kanto tsara alohan'ny hanaterana anao.
Ny slabs dia nahazo fanamarinana kalitao avy amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
Ny vokatray rehetra dia tohanan'ny fiantohana voafetra 10 taona.
1. Ity fiantohana ity dia mihatra amin'ny takelaka vato quartz APEX novidina tao amin'ny orinasa Quanzhou Apex Co., Ltd. fa tsy orinasa fahatelo hafa.
2. Ity fiantohana ity dia mihatra amin'ny takelaka vato quartz Apex tsy misy fametrahana na dingana.Raha manana olana ianao, aloha pls maka sary mihoatra ny 5 ao anatin'izany ny slab feno eo anoloana sy aoriana lafiny, antsipiriany ampahany, na hajia eo amin'ny lafiny sy ny hafa.
3. Ity fiantohana ity dia TSY mandrakotra izay mety ho lesoka hita amin'ny poti sy ny fahasimbana be loatra amin'ny fotoana fanamboarana sy fametrahana.
4. Ity fiantohana ity dia mihatra amin'ny takelaka quartz Apex izay nokarakaraina araka ny torolàlana Apex Care & Maintenance.
Ny APEX dia nahazo ny mari-pankasitrahana an'ny SGS, Greenguard.Ny vokatra dia mampiasa fitaovana azo antoka sy mitsinjo ny tontolo iainana mba hifandraisana mivantana amin'ny sakafo.Izy ireo dia manome antoka ny fiarovana sy fiarovana ambony indrindra ho an'ny mpanjifa.
Fizotry ny famokarana siantifika
Ny vokatra Apex Quartz dia amboarina amin'ny fenitra avo indrindra.
Apex Packing sy Loading
Vidin'ny marbra Quartz Tsena Stone Engineered Vidin'ny Quartz Countertops Vato Quartz Gray Countertops Quartz marika tsara indrindra Quartz Countertops Slabs